खुःसी हुनु नै सफलता हो : अनिल शाह | KTM Khabar
२०७२ माघ १४ गते ०७:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – सेलिब्रेटी बैँकर हुन अनील केशरी शाह । हलो देखी हाइड्रो सम्म नारा बोकेको मेगा बैँकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)को कुर्सिमा विराजमान अनीलका बारेमा सुन्दा बुझ्दा धेरैले मुख मिठ्याउँछन् । हुनत उनी जागीरे हुन तर सामान्य व्यवसाय गर्न चाहिने पुजी जति उनको मासिक तलब नै छ । त्यसो त उनको जागीर १०-५ हाजीर भएर खाने खालको पनि हैन । उनीत १०–५ भएर खानेहरुले गर्ने कामको बन्दोबस्त गर्छन् । उनको एउटै निती तथा कार्यक्रमले नै बैँकलाई धेरै माथि पुर्याइराखेको हुन्छ ।
सानदार जागीरे उनी सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढ्ने परिक्रम र मिहिनेतका पुजारी हुन । नेपालमा धेरै युवा बेराजगार भैयो भन्दै एर्पोर्ट तिर लाइन लागीरहदा अनील नेपालीहरुको सृष्टिमा हैन दृष्टिमा दोष देख्छन् । नेपालीहरु सुनको थाली बोकेर सुकाको याचना गरीरहेका छन् भने भैmँ अनील नेपाल आफैमा गरिव नभएर नेपालीहरुको सोच गरिव देख्छन् । आजकाल विभिन्न मोटिभेश्नल सेमिनारमा समेत आफ्ना सफलताका सुत्रहरु बाँडिरहेका भेटिन्छन् उनी ।
विशेषत युवापुस्तामा धेरै सम्भावना भएको र त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सघाउने उद्येश्यले नै उनले सफलताका मन्त्रहरु बाँडिरहेका छन् । उनै सफल बैँकर तथा सेलिबे्रटी शाहसंग सफलताका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
सफलातालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
सफलताको आफ्नै एउटा मापदण्ड हुन्छ । अनिल शाहको सफलता हेरौँ या राजेश हमालको सफलता हेरौँ अथवा विमल घर्तीको सफलता हेरौँ या पारस खड्काको सफलता हेरौँै सबैको सफलतामा फरक फरक कारणहरु छन् । मेरो बुझाईमा सफलता भनेको त्यो चिज हो, जसले मान्छेलाई खुशी बनाउँछ । फरक व्यक्तिमा सफलताको मापदण्ड फरक हुन सक्ला तर अन्त्यमा सफलता के हो भनेर बुझ्दै जाँदा खुशी नै सफलता हुन आउँछ ।
त्यसो हो भने सफल हुनलाई खुशी हुनपर्यो, खुसी कसरी हुन सकिन्छ ?
सफल हुनलाई खुशी एउटा गन्तव्य हो र खुसी सफलताको माध्यम हो । कोही हामीले हेर्दा सफल हुनुहुन्न तर उहाँ खुशी हुनहुन्छ भने उहाँको जीवनमा उहाँ सफल हुनुहुन्छ । ऋषि मुनिहरु हेर्नुहोस्, यो के गरेको हो ? लुगा पनि एउटा मात्र छ तर उहाँहरुजस्तो खुशी मान्छे कोही पनि छैन होला । कोही मान्छेलाई धनले एकदम खुशी बनाउँछ । मेरो विचारमा खुशी हुनलाई पाँचओटा तत्व चाहिन्छ । त्यो तत्वको मात्रा कति चाहिन्छ हरेक मान्छेको फरक हुन्छ । हरेक मान्छेको खुशीको शुत्र फरक हुन्छ । मेरो खुशीको शुत्र अर्कोलाई काम नलाग्न सक्छ ।
के हुन् पाँच तत्व ?
त्यो पाँचओटा तत्वहरुमध्ये पहिलो परिवार र साथीभाई । कोही मान्छे साथीभाई र परिवारसँग भए धेरै खुशी हुन्छ भने कोही एक्लै बस्दा खुशी हुन्छ । दोश्रो भनेको पैसा हो । कोही मान्छे पैसा भयो भने अति खुशी हुन्छ । कसैलाई पैसाले कसरी खुशी दिन्छ भनेर अच्चम लाग्छ । तेस्रो भनेको स्वास्थ्य । अस्वस्थ कोही पनि हुन चाहँदैन । कोही विहान बेलुका कसरत गर्छन् । जाँड रक्सी, खैनी चुरोट खाँदैनन्, ड्रग्स खादैनन् भने कसैलाई केहि मतलबनै छैन ।
अर्को भनेको शक्ति । कोही जताततै आफ्नै बारेमा चर्चा होस्, जता गए पनि वा–वाई पाईयोस्, आफूलाई जताततै सम्मान होस् भन्ने चाहन्छन् भने कसैलाई यो कुराले सन्चो नभएजस्तो, वान्ता आउला जस्तो हुन्छ, म के गरौँ कता जाँउ, मलाई काम गर्न पाए हुन्छ अरु केही चाहिँदैन भन्नेहरु हुन्छन् । र अन्त्यमा पाँचौ भनेको म । मान्छेले आफुलाई बुझ्न कतै योगा गरिरहेको देखिन्छ त कतै ध्यान । धर्मकर्म आदि इत्यादी । मान्छेले यो बुझ्दैनन् की सबैभन्दा पहिला म हो । सुरुमा जन्मिँदा पनि म थिए र अन्तमा मर्दा पनि म हुन्छु भनेर मान्छेले बुझ्दैनन् । हामीले कपाल मिलाउन, दाह्री काट्न, लुगा लगाउन कति समय लगाउँछौँ तर आफुलाई पाँच मिनेट समय दिँदैनौँ ।
यो पाँचओटा तत्वलाई एउटा कागजमा लेख्ने । अनि १०० मार्क दिने । यो १०० मार्कको पाँचओटामा वितरण गर्ने ? आफुलाई केले बढी खुशी दिन्छ त्यसलाई अलि धेरै मार्क दिने । जस्तै मलाई पैसाले धेरै खुसी दिन्छ पैसामा ७० प्रतिशत दिनुहोस् । परिवारलाई दुई दिए पुग्छ । कोहीलाई परिवार भए पुग्छ पैसाले केही पनि गर्दैन भन्ने होला । यी कुरा गरिसकेपछि आफ्नो खुशीको शुत्र आँफै थाहा हुन्छ ।
शुत्र त बन्यो यो शुत्रलाई पुरा गर्न पनि त केहि गनुपर्छ होला नि ?
हो शुत्र त बन्यो । तर पैसालाई ७० प्रतिशत राख्यो । व्यापार व्यावसाय गर्यो राम्रो पैसा आयो तर परिवार छैन भने, त्यो शुत्रको काम भएन । यो शुत्र बनाईसकेपछि त्यसलाई फेरी छाँट्न पर्यो । मान्छे गणितमा राम्रो छ, उसलाई अँग्रेजीको ट्युसन पढायो भने अनुपातमा त राम्रो हुन्छ तर गणितमा उ पहिला भन्दा नराम्रो भैसकेको हुन्छ । किन कि उसले गणितलाई दिने समय अंग्रेजीमा दियो । कसैले गणितमा राम्रो गर्ला, कसैले विज्ञानमा राम्रो गर्ला त कसैले अंगेजीमा राम्रो गर्ला । कसैले फुटवलमा राम्रो गर्ला त कसैले क्रिकेटमा राम्रो गर्ला । पहिला कुन विषयमा राम्रो छु भनेर मुल्याङ्कन गर्नुपर्यो । त्यसपछिमात्र शुत्रलाई पूर्णता दिनुपर्यो । जस्तै पारस खड्का क्रिकेटमा राम्रो छ भनेर उसलाई फुटवल पनि खेलाउनुपर्छ भनेर भन्यो भने के पारसले गोल गर्लान् त ? त्यसैले को केमा दक्ष छ, त्यसैमा मिहिनेत गर्नुपर्यो । राम्रो भएरमात्र भएन धेरै राम्रो हुनपर्यो । अनिमात्र सफलता मिल्छ ।
तपाईको सफलताको शुत्र के हो ?
मेरो सफलताको शुत्र यहि हो । मैले कलेजमा पढ्दाखेरी साथीहरुले आफ्नो शुत्र बताउँथे । मैले पनि गरी हेरौँ न भनेर आफ्नै शुत्र बनाए । त्यहि अनुसार अगाडि बढ्दै गएँ ।
यो सुत्रले यहाँको जीवनमा कहाँबाट सफलता दियो, टर्निङ प्वाइन्ट कुन हो ?
मैले नौ ओटा फरक फरक स्कुलमा अध्ययन गरे । त्यतिबेला मेरो आमा परराष्ट्रमा हुनुहुन्थ्यो । हरेक दुईवर्षमा मेरो स्कुल परिवर्तन हुन्थ्यो । कहिले बुवाको सरुवा हुन्थ्यो त कहिले आमाको । त्यो नै मेरो टर्निङ प्वाइन्ट हो । किन कि अरु मान्छेहरु परिवर्तन गर्न डराउँछन् । ठिकै छ चलेकै छ यतिकै भए हुन्छ भन्छन् तर मलाई परिवर्तन चाहिन्छ । दुई चार वर्षमा परिवर्तन भइरहनु पर्छ भएन भने के के नमीलेको जस्तो हुन्छ मलाई । अर्को मेरो टर्निङ प्वाइन्ट भनेको जव म घुम्न भनेर अमेरिका गएको थिएँ । त्यहाँको कलेजमा गएँ । कलेजमा गएपछि कलेजले भर्ना त गर्छौँ तर तिमीले राम्रो गर्यो भने पढ्न पाउँछौ नत्र पठाईदिन्छु भनेपछि भैले रिक्स लिए । बुवा आमा कसैलाई नसोधेरै आफैँ काम गरे । त्यहाँदेखि मैले कसैलाई भनसुन गरेर । यो त्यो भनेर गर्नुभन्दा आफैँ गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भावना पैदा भयो ।
सफलताको लागि रिक्स लिनै पर्छ त ?
रिक्सको महत्व धेरै नै हुन्छ । सबैले जे गरिरहेका छन् त्यो गरेपछि अरु कहाँ छन् त्यहि मै सिमित रहन्छ तर त्यो भन्दामाथि जानु छ भने रिक्स मोल्नु जरुरी छ । अरुभन्दा फरक भएर हिड्नु पर्छ, कहिलै आफ्नो बाटो आफैँ बनाउनु पर्छ । बाटो हिड्दा कोही सफल भएका छन् भने कोही त्यहि बाटोमा हराएका पनि छन् । त्यसैले रिक्स लिनुपर्छ तर रिक्स लिनुभन्दा पहिला केहि तयारी भने गर्नुपर्छ ।
जस्तै रिक्स लिने भनेर खोला देख्यो अनी उसलाई पैडिन मन भयो । पौडिन सिकेको छैन् अनि त्यो खोलामा हाम फाल्यो । यस्तो खालको रिक्सले काम गर्दैन । नदीमा पौडिन भन्दा पहिला एउटा सानो पोखरीमा पौडिन सिक्नु पर्यो । आफू पौडिन सक्छु भनेर आत्मविश्वास बढाउनुहोस् । पौडिन सिकेर राम्रो भएपछि अनि पो खोलामा आँखा कान चिम्लेर हाम फाल्ने होस् । तव पो तपाईको रिक्सले सफलता पाँउछ । नत्र भने रिक्स मोल्ने भएर खोलामा झ्वाम्म हाम फालेपछि खोलोले बगाएर लान्छ ।
हजारौँ युवाहरु विदेशीँदै छन्, के साँच्चीकै नेपालमा सम्भावनाहरु नभएको हो त ?
नेपालमा सम्भावनाहरु छ । म अमेरिकामा अध्ययन गर्दा साथीहरुसँग सल्लाह गर्थे । कसैले नगरेको काम के छ खोजाँैन भन्दा हामीले भेटेका थिएनौँ तर अहिले पनि नेपालमा हामी चारजना बसेर सल्लाह गर्यौ भने पाँचसय बढी नेपालमा कसैले नगरेका काम को लिस्ट तयार हुन्छ । त्यसैले नेपालमा धेरै सम्भावनाहरु छन्, गर्न चाहने एउटा आँट चाहिन्छ । एउटा काम गर्ने वातावरण छैन नेपालमा । किन छैन भन्दाखेरी नेपालमा राम्रो खालको नेतृत्व नहुनु हो ।
नेतृत्व राजनीतिमा मात्र हैन । हरेक क्षेत्रमा नेताको खाँचो छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र जतासुकै नेतृत्व अभावले हामी यहाँ पुगेका छौँ । मेरो विचारमा हाम्रा युवाहरुबीचबाट राम्रो नेतृत्व आउन सक्यो भने यो देशको भविश्य राम्रो छ । मलाई विश्वास छ, अहिलेको युवा पढेलेखेको छ, सबैकुरा बुझेको छ ।
नेपाली युवाहरु विदेशमा गयो भनेर तर्सिनु पर्दैन । उहाँहरु जानुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो भन्दा धेरै सिप सिक्नुहुन्छ र नेपाल फर्किनुहुन्छ । पुँजी र सिप दुवै लिएर उहाँहरु नेपाल फर्किनुहुन्छ । यसपछि नेपालको विकासले गति लिन्छ । राम्रो नेतृत्व त्यो पनि युवाको हातमा आउने हो भने अवको पाँच सात वर्षभित्र नेपालको मुहार फेरिन्छ । यो देश चिन्नै नसक्ने हिसावले विकासित हुन्छ ।
अहिले ग्लोवलाईजेसनको समय भन्छौँ हामी तर आफूलाई शुरुमा भित्रैबाट झाकौँ । आफु भित्र झाँकेर हेर्दा आफ्नो मन अमेरिकामा छ भने एक चोटी गएर आउने । अष्टे«लियामा छ भने अष्टे«लिया जानुहोस, नेपालकै खाला नाला, डाडाँ पाखा पखेरामा छ भने नेपालमै बस्नुहोस । हामी नेपालमा बसेकाले बुद्धि, विवेक लगाएर यस्तो देश बनाउँकी जो विदेश गएकाहरु नेपाल फर्केर आउन् । यदि तपाई यहाँ बस्न चाहनु हुदैन भने नेपालमै बसेर नपाललाई नै नसराप्नुहोस् ।
नेपालमा बस्ने हो भने काम गरौँ देश बनाउँ, सकारात्मक सोचेर अगाडि बढौँ । वत्ती छैन, छैन त के गर्ने ? काठमाडौँ फोहोर छ ? यहाँले कहिलै टिप्नुभएको छ सडकबाट फोहोर ? वत्ती छैन भने सोलार जोडौँ ।अरु विकल्प खोजौँ । हरेक व्यक्तिले सकारात्म सोचेर यो देश मैले बनाउँनुपर्छ भनेर अगाडि बढौँ केहि वर्षभित्रै विदेशीएका लाखौँ नेपाल फर्किनेछन् ।
नेपालमा राजतन्त्र गैसक्यो । गणतन्त्रमा छौँ हामी यो देश हामी हरेक नेपालीको हो । हाम्रो देश हामी आफैँले बनाउनुपर्छ । नेपाल नेताको मात्र हैन, नेतृत्व मन परेन अर्को ल्याँउ । नेपाल गरिव होइन हाम्रो सोच गरिव हो । जे सोच छ त्यहि गरौँ । संधै सकारात्मक सोचौँ र अगाडि बढौँ ।
साभार : मोटिभेट न्युज